Takhalusid Music ka iPhone dhakhso ah o
> Resource > iPhone > Sida loo Delete Music ka iPhone
Ma doonaysaa in ay tirtirto songs in aad dhegeysto kumanaan jeer ka iPhone. By ay u qabanayaan, waxaad kala socon kartaa adiga oo music updated oo lacag la'aan ah ilaa meel iPhone for files kale Si kastaba ha ahaatee, songs tirka ka iPhone ma fududa. Waxaad awood u midba mid si toos ah iPhone la tirtiro heesaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa wakhtiga iyo tamarta qaadataa. Si loo xaliyo dhibaatada idiin, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin Wondereshare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Qalabkani waxa uu awood aad tirtirto music ka iPhone si degdeg ah oo sax ah.
Isku day TunesGo Wondershare in ay tirtirto music ka iPhone!
Fiiro gaar ah: Sida aad ka arki, labada kala soocay versions Windows iyo Mac jira oo dhan laga heli karo. In socda, waxaana dooneynaa in ay ka hadlaan sida ay u tirtirto music on iPhone la TunesGo Wondershare.
Sidee in ay tirtirto music ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 4 / 4s / 5 / 3GS
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan iPhone la PC
Ka dib markii aad ka soo dejisan iyo rakibi TunesGo, double-riix bilowga icon deg deg ah ku desktop-ka si ay u abuurtaan. Isticmaal cable USB soo socda la iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone in PC. Qalabkani waxa uu ogaan doonaa iPhone dhakhso oo tus ku furmo suuqa ugu weyn.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho TunesGo, fadlan soo dajiyo Lugood on your computer hore.
Tallaabada 2. Sidee in ay tirtirto heeso ka iPhone
Delete music ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 4/5 / 4s / 3GS
Marka aad dhamaysato tallaabada ugu horreysa, waxaad arki kartaa dhammaan xogta aad iPhone ku qoran yihiin bidixda. Guji " Media ". Daaqadda warbaahinta, guji " Music ". Tani waxay keeni doonaa suuqa kala music dhinaca midig. Dhammaan songs halkan ku qoran. Dooro songs in aad go'aansato in aad ka saarto oo guji "Delete". Marka uu furmo suuqa yar booda, aad weydiinaya si loo hubiyo Kabcada_, guji " Haa ". Markaas qalab ka bilaabmayaa in ay tirtirto music ka iPhone.
Ka hor inta songs tirka ka iPhone, waxaan soo jeedinaynaa in aad dib u heeso on iPhone hore haddii aad shil iyaga tirtirto. Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada macruufka 9/8/7. Ogaaw in aad xor in ay tirtirto music on iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4s iyo iPhone 3GS. Haddii aad u baahan tahay, waxa kale oo aad kartaa in aad tirtirto playlist ka iPhone la TunesGo Wondershare sidoo. Waa maxay sababta aan kala soo bixi TunesGo in ay isku day ah oo ay adiga kuu gaar ah?
Daawo video ay bartaan sida loo tirtiri music ka iPhone
Sida loo Delete Xiriirada ka iPhone
Top 10 Apps si aad iPhone More Secure
iPhone 6s (Plus) Iyo Wararka Xanta da'ayo ah